ပြည်သူ့ထံသို့အရောက်လာမည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပြည်သူ့ထံသို့အရောက်လာမည်။
Posted by mG on Nov 3, 2010 in News |5comments
” ပြည်သူ့ထံသို့အရောက်လာမည် “ ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာလေးကိုတော့ မြန်မာ့အရေး နဲ့ နိုင်ငံအရေးကိုအလေးထားသူတိုင်းအထူးပြု
စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ကျွန်တော့ကိုတော့နိုင်ငံရေးတွေပဲတင်ပြနေတယ်လို့တော့ ထင်နေမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒက
နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်ပါ။ရုပ်ရှင်ထဲတွေမှာလည်း လာလာနေပါတယ်။မဲတစ်မဲဟာဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိလည်းဆိုတာကို
ပါတီတခုအကြောင်းပါ။ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားသော်လည်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ကန့်သက်ချက်များကြောင့်
” ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီ ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပါတီမှာဆိုရင်တော့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ်……..
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ( ဦးရဲထွန်း ) အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ) DMA (Part II)
လူမျိုး / ဘာသာ – ဗမာလူမျိုး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
နေရပ်လိပ်စာ – တိုက် (F) ၊ အခန်း (၃၀၁) ၊ ပုလဲကွန်ဒို ၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။
ဦးရဲထွန်းဟာ ၁၉၈၇ခုနှစ် တွင်သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။၁၉၈၈-၉၀ခုနှစ် များအတွင်ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံပါတီတွင်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်
၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(တကသ)ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရရှိစေရန်ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များ
ဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးအောင်၊ဗိုလ်ရဲထွဋ်၊၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင် စသည့်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ၊ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ဦးစိုင်းညွန့်လွင်၊ဦးနိုင်ခင်မောင်၊နိုင်ငွေသိန်း စသည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် နှင့်လည်းကြိမ်ဖန်များစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။၁၉၉၅ခုနှစ်သြဂုတ် ၈ရက်တွင် ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၁၉၉၅ခုနှစ် ၊ “တက္ကသိုလ် စိန်ရတုသဘင်၊ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးများအား တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား” ကိုကျင်းပရန်ဦးဆောင်စီးစဉ်ခဲ့ပြီး
တားဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ထို့နောက်ကျောင်းသားလူငယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ စီးစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး “၂၁ဦး ကြေညာချက်” ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၁၉၉၆ခုနှစ် သြဂုတ်
၈ ရက်နေ့တွင် (တကသ) အနေဖြင့် “ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကြေညာချက်” ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့တွင်
ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်ဒဏ် (၁၃ နှစ်)ချမှတ်ခံရသည်။အင်းစိန်ထောင်တွင် (၁) နှစ် နှင့် သရက်ထောင်တွင် (၈)နှစ် နေခဲ့ရသည်။
ထောင်မှလွတ်ပြီးနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောက်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး
ပါတီအဖြစ် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဌတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။
ယခုအခါတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ပုလဲကွန်ဒို၊တိုက်(F)၊အခန်း(၃၀၁) တွင်နေထိုင်လျှက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ၊
လူအခွင့်အရေး အဆင့်အတန်းကို ပိုမိုမြင့်မားလာစေပြီး “နိုင်ငံသား အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အမျိုးသားနိုင်ငံေ၇းအခန်း ကဏ္ဍတစ်ရပ်” ပီပြင်စွာ
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ( ဦးသန်းဦး ) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ပညာအရည်အချင်း – ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)
နေရပ်လိပ်စာ – အမှတ်(၈၄၃/ခ) ၊ (၂)လမ်း ၊ (၁)ရပ်ကွက် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
ဦးသန်းဦး၏ တာဝန် နှင့် လှုပ်ရှားမှု အကျဉ်းချုပ်…………….
၁၉၈၈ခုနှစ် တွင်အင်းမဒေသလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။၁၉၉၀ခုနှစ် တွင်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
ဦးအေးလွင်၏ ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ပညာသက်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ကျောင်းသားဘ၀တွင် ကျောင်းသားအရေးကိစ္စများဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(တကသ)ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး
၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ရတုသဘင် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမြက်ခင်းပြင်တွက် (တကသ) မှ (၅-၁၂-၁၉၉၅)
နေ့တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ရာ ခေါ်ယူသတိပေး၊ထိန်းသိမ်း တားမြစ်ခြင်းခံရသည်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဦးအောင်ရွှေ၊ဦးတင်ဦး၊ဦးကြည်မောင်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးခွန်ထွန်ဦး။တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊၀ိဓူရသခင်ချစ်မောင် ခေါင်းဆောင်သည့်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး
များနှင့်အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးအားထုတ်ခဲ့သည်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော် ဦးဆောင်သည့်
အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း ၊ဗိုလ်ရန်နိုင်တို့ နှင့် လည်းကောင်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် (တကသ)၏ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ကြေညာချက်
ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ထောင်(၁၃ နှစ်) ချမှတ်ခံရသည်။
၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ပြန်လွှတ်လာပြီး ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ၊
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား ၊ ဂျပန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ဥရောပသမဂ္ဂတို့နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။အမေရိကန်လက်ထောက်
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်စဉ်ပါတီ ကိုယ်စားပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီတွင် ဒုတိယဥက္ကဌတာဝန်ယူပြီး ပြည်သူရှေ့မှနေကာ ဒီမိုကရေစီ နှင့်လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရန်
စာစဉ်ဆောင်ပုဒ် – ( ခွပ်ဒေါင်းကို မဲပေးကြစို့ )
ဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ် ။ ။တိုက်(F)၊အခန်း(၃၀၁)၊ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
စာမူခွင့်ပြုချက် (ကင်းလွတ်ခွင့်အမှတ်) – ( မြဲ-၀၄၉၇၆ ) အောင်သုခပုံနှိပ်တိုက်
မေတ္တာရပ်ခံချက် ။ ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဓာတ်ပုံများအား တင်ပြ၊ဖော်ပြရန် Connection အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့်
နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်။ အချို့သော ပြည်သူများ၏လက်ထဲတွင်လည်း လက်ကမ်းစာဆောင်များ ရောက်နေလောက်ပါပြီ။
လည်းကောင်းလက်ကမ်းစာဆောင်များတွင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဓာတ်ပုံများပါရှိသည်။
ကျနော်သိချင်တာလေးရှိလို့ပါ …. ဦးရဲထွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားမှုများကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး …..
မင်းကိုနိုင်တို့ ပြတ်ပြတ်သားသား တော်လှန်နေချိန်တွင် နအဖက ဦးရဲထွန်းတို့အဖွဲ့ကို ၈၈ ကျောင်းသားမျိုးဆက်များ
နအဖ နှင့်ပူးပေါင်းသယောင် … ရေးသားခဲ့ဘူးသည်။ ပြည်သူအများက ဦးရဲထွန်း တို့ နအဖ နှင့်ပူးပေါင်းသွားပြီလို့ယူဆကြပါသည်။ … တဖန် ဦးရဲထွန်း၏ပါတီကို ကြံ့ဖွံ့က နှောက်ယှက်တော့ ဦးရဲထွန်းတို့က
ထအော်ကြပြန်သည်။ … ပြည်သူတို့အမြင်မှာ နအဖ သည် ဦးရဲထွန်းတို့ကို … ၈၈ ကျောင်းသားများ သွေးကွဲစေမှုအတွက် အသုံးချယုံသာအသုံးချသွားသည်ဟုယူဆပါသည်။ အဖြစ်မှန်မည်သို့ပါလဲ။
ဟုတ်ပြီဒီပါတီကလူတွေနိုင်လို့အမတ်ကြီးတွေဖြစ်သွားပါပြီတဲ့…. တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ ဒါလေးလဲရှင်းပြအုံးလေ….
@fatty >> မေးထားတာကို ကျွန်တော်တို့လို့ အသင်းသားဖြစ်တဲ့ လူတွေက ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။သို့သောများလည်း ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် ဦးရဲထွန်း ဟာတော်လန်ရေး မှတ်တမ်းဝင် ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်သည့်အတွက် လူကြီးကြားနေ
ရသော သတင်းများကို ယခင်က ကျွန်တော်လည်းကြားဖူးပါသည်။မိမိတို့မှာ သတင်းစားရှင်းလင်းပွဲသို့၊ဟိုလိုရှင်းလင်းပွဲ
သို့ဘာသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိ။လုပ်ရင်လည်း ပါမိတ်အပိတ်ခံရတာကြောင့် လူအများကို ရှင်းပြဖို့အခက်တွေ့ခဲ့ရခြင်းတာဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။
@koyinmaun > > မေးထားချက်ကိုပြောပြပါ့မယ်။ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ ပါတီဟာအရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုရင်…..။
ကျွန်တော့အမြင်တော့ လွယ်လွယ်နဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျိမ်းသေတာကတော့ တော်လှန်ရေးလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါပဲ။
မှတ်ချက် ။ ။ပါတီ၏ ပါဝင်သူနှင့်ပါဝင်သူများအကြောင်းကိုသာ ပြည်သူများ သိရှိစေရန်
တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသောကြောင့် လည်းကောင်းကဲ့သို့မေးမြန်းခြင်းများအား သည်းခံပေးပါ။
၀န်ခံချက် ။ ။အထပ်ဖော်ပြပါ ရှင်းလင်းချက်များကိုလည်း မိမိ၏ အမြင်နှင့်သာပြောကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေ
ကျနော်တို့ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကတော့ တစ်ခုတည်းသောဗမာ့ထွက်ရပ်လမ်းလို့ခေါ်တဲ့ ပြည်လုံးကျွတ်ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ွဲတိုက်ပွဲ်ကိုဘဲဦးတည်ဘို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ လူထုအားနဲ့လူထုအားသာလျှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုအာမခံနိုင်မ၊ဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးမဲ့ ၊ သန်းရွှေရဲ့မတရားရွေးကောက်ပွဲအောင်မြေနင်းပွဲ ဟက်ိတက်ကွဲအောင်လုပ်ဆောင်ပေးမဲ့မဟာအင်အားဘဲ။ လူထုအားကိုယုံကြည်ဲ့တဲ့လူများသာသပိတ်မှောက်အနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
တကိုယ်ကောင်းဆံပြီးလူထုကိုကြောခိုင်းသစ္စာဖေါက်သူများသာ သန်းရွှေကအရိုးအရင်းလေးကြွေးလဲမနဲဘူးဆိုပြီး သန်းရွှေအောင်မြေနင်းနိုင်အောင်ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနေကြတယ်ဆိုတာကိုလဲလူတွေကအသိပါဘဲ။ လူထုကဒီလိုလူတွေကိုဒါဏ်ခတ်ဘို့ရက်တွေလဲနီးလာပါပြီ။
@timothy >> အရမ်းကောင်းတဲ့ စာသားလေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..။